Waxaad wax badan ka qaban karto VLC Media Player iyo sidoo kale mid ka mid ah waxyaalahan oo waa in aad ka ciyaari kara wax video YouTube aad doorato isticmaalaya Media VLC ka Player. Waa maxay sababta aad u rabto in aad samaysato in marka aad sameyn kartid wax isku mid ah oo ku saabsan YouTube? Waa hagaag sababo ay ka mid yihiin gacanta ku fiican in ka badan oo ka mid ah haya'ad video iyo maqal ah, si fiican u doondooni gacanta ku iwm Si kastaba, aynu si deg deg ah ku talaabsado mid uu leeyahay in la raaco si ay u awoodaan inay tan sameeyaan.
Qeybta 1: Play YouTube videos si toos ah VLC Media Player
Qeybta 2: Watch oo dhan playlists YouTube In VLC Media Player
Qeybta 3: Sida loo download video YouTube isticmaalaya VLC
Qeybta 1: Play YouTube videos si toos ah VLC Media Player (Windows iyo Mac)
Fur video YouTube in aad jeclaan lahayd in aad aragto in mid ka mid ah daalacashada aad leedahay oo nuqul ka link in ay video ka bar cinwaanka aad browser.
Hadda, furo Media VLC ka Player on your computer oo riix Ctrl + N, waa in la furo dariishadaha gujisid loo yaqaan Open Media idiin ah. In qaybta ka sheegay Fadlan qor URL shabakad: galaan link in ay video in aad hore u soo guuriyeen oo ka dhacay gala ama Play xusho oo ka hooseysa.
Hadda, VLC waa in ciyaari video ee dhowr ilbidhiqsi ka dib marka aad wada oofiyeen Tallaabada 2. Ku raaxayso!
Qeybta 2: Daawo oo dhan playlists YouTube In VLC Media Player (Windows iyo Mac)
Tag ka playlist YouTube on suuqa kala browser ah iyo nuqul ka link in ay playlist in
Hadda, ordo VLC Media Player on your computer oo taga si View> playlist ama jaraa'id Ctrl + L. Tani waa in la furo playlist qaybta aad taas oo noqon waa madhan markan.
Sida aan horay u samaysay, haatan wax miiran Ctrl + N in la furo qaybta Open Media on VLC oo halkan paste YouTube playlist link hore soo guuriyeen. Iyo, riix badhanka Play ama gala. Sida ugu dhakhsaha badan aad taas samayn, VLC playlist waa in la cusboonaysiiyaa oo dhan videos ee playlist YouTube iyo VLC waa in ay bilaabaan iyaga sequentially wax yar ka ciyaaray.
Qeybta 3: Sida loo download video YouTube isticmaalaya VLC (Windows iyo Mac)
Fur YouTube on browser web ah.
Raadi video ah oo aad jeclaan lahayd inaad kala soo baxdo nuqul oo Jidka video in ka siiyaa biraawsarkaaga cinwaanka bar.
Hadda, VLC Media bilaabi Player on your computer oo riix furayaasha Ctrl + N. Waa in la furto daaqad cusub oo aad loo yaqaan Open Media. Dhaji Jidka video in aad hore ee qaybta ka ayaa sheegay in ay soo guuriyeen ah 'Fadlan qor URL shabakad:' dooro Play.
Sida loo Beddelaan iyo Guba Home Movies / Videos in DVD
> Resource > Video > Sidee u ciyaaro YouTube videos in VLC media player